Moments leh saaxiibo 27
Miyuu aaminsan yahay in reer Atlanta ay duuli karaan? Hadday sidaas tahay, xaggee bay aaminsan yihiin?
Plato ayaa laga yaabaa inuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee barata dunida reer galbeedka qaaradda Atlantis ee lumay. Kuwii kale ee raacay waxay qaateen mawduuca waxayna ka faalloodeen waxoogaa taariikhda ah oo uu ka bixiyay markii uu ka yimid awowgiisii ​​Solon, kaasoo sheegtey inuu u gudbiyay wadaadada qadiimka ah ee qadiimiga Masar. Halyeeyo badan ayaa ku soo degay qaabab kala duwan, jasiiradda ama qaaradda Atlantis. Bacon wuxuu wax ka qoray, laakiin buugga ugu caansan waa kan Ignatius Donnelly: “Atlantis; Antediluvian World. ”Uma maleynayno in mid ka mid ah kuwa wax ka qoray Atlantis, in ay wax ka sheegeen wax ku saabsan duulista hawada, ama awooda Atlanteans-ka inay duulaan.
Ma aha ilaa Madame Blavatsky ay ku daabacday cinwaankeeda '' Doctrine Doctrine '' ee 1888 wax walba oo ay ahayd xaqiiqadii laga sheegay Atlanteans-ka iyo duulista Madxafka 'Bla Doctrine' Madame Blavatsky wuxuu sheegayaa, iyada oo Atlanteans-ka, duulista hawada ay xaqiiq tahay isla markaana ay siineyso taariikh kooban oo kusaabsan sababta keentay hoos u dhaca Atlantis iyo sida duulista hawada ay door muhiim ah u lahayd dayrta. Madame Blavatsky ma sheeganayso sharafta daahfurka nafteeda. Waxay ku leedahay "Doctrine Doctrine" in wixii ay iyadu siiso iyada laga soo bilaabo taariikhda dhabta ah ee Atlantis, laga soo qaaday diiwaannada raggaas caqliga leh ee aan weligood dhiman, kuwaas oo sii haya oo gudbiya taariikhda kor u kaca iyo dhicitaanka. qaaradaha iyo isbeddelada juquraafiyeed iyo isbeddelada kale ee dhulka, ee la xiriira horumarka jinsi ee aadanaha iyo sare u kaca iyo dhicitaanka ilbaxnimadiisa waqtiga oo dhan. Qoraa su’aasha iyo kuwa kale ee “Doctrine Doctrine” ma laga heli karo waxay xiiseynayaan oraahdan soo socota ee shaqada:
"Waxay ka soo jeeddaa Afartii Hore in kuwii hore ee Aryans ay ogaadeen 'xirmadaha waxyaabo cajaa'ib leh', Sabha iyo Mayasabha, oo lagu xusay Mahabharata, hadiyadda Mayasura ee Pandavas. Waxay ka timid iyaga inay barteen cilmiga hawada, Viwan, Vidya, 'aqoonta duulista gawaarida hawada', iyo, sidaa darteed, farshaxankooda weyn ee Saadaasha Hawada iyo Saadaasha Hawada. Waxay ka timid iyaga, mar kale, in Aryansku ay dhaxleen sayniska ugu qiimaha badan ee dabeecadaha qarsoon ee dhagaxa qaaliga ah iyo dhagaxyada kale, ee Chemistry, ama halkii ay ahayd Alchemy, ee Macdanta, Joloolajiga, Fiisigiska iyo Astronomy. ”(3d Ed. Vol. II.). , p. 444.)
Waa kan qeyb ka mid ah sheekada hore ee ka faallaysa:
''. . . Iyo 'Boqorka weyn ee Wajiga Dazzling,' oo ah kan ugu horreeya wejiga jaalaha ah, wuxuu ahaa mid murugo leh, isagoo arkay dembiyada wajiga Madow.
Wuxuu u diray gawaaridiisii ​​dagaalka (Vimanas) dhammaan walaalihiis (madax ka tirsan quruumaha iyo qabaa'ilka) rag daacad ah oo gudaha ah, isagoo leh: Diyaarso. Kuwiinna sharciga wanaagsan ahow, kaca, oo dalka u cidla intaanad engegin.
Sayidka duufaanka ayaa soo dhowaanaya. Gawaarradoodii waxay ku dhowaadeen dalka. Hal habeen iyo laba maalmood kaliya Eebaha murugada leh (Saaxiriintu) waxay ku noolaan doonaan dalkan bukaanka. Iyadu waa halaagaa, oo waa inay la socdaan. Shabakada udub-dhexaadka dabka ah (Gnoes iyo Elementals Fire) waxay diyaarinayaan sixirkooda Agnyastra (hubka dab-ka-shaqeeya ee Magic). Laakiin Eebaha isha mugdiga ("Isha sharka") way ka xoog badan yihiin (Elementals) waana addoonsiga kuwa xoogga badan. Waxay ku fiican yihiin Astra (Vidya, aqoonta ugu sarreysa ee sixirka). Kaalay oo isticmaal awoodaada (yac, awoodaada sixirka, si looga hortago kuwa sixirbararka). Rabbi kasta oo Wajiga Dhadhaafka ah ha ku soo dejiyo Vimana Rabbi kasta oo mugdi ah gacmihiisa ha ku galo gacantiisa (ama lahaado), waaba in mid ka mid ah sixirlayaashu ay ka baxsadaan biyaha. , ka fogow usha afarta (Hay'adaha Samafalka), oo badbaadi kuwa xun (dadka raacsan, ama dadka). ' ”. (Ibid, p. 445.)
"(Laakiin) quruumaha ayaa hadda ka gudbey dhul engegan. Iyagu way ka sii gudbeen boog-biyoodka. Boqorradoodu waxay ku gaadheen iyaga Vimanas, waxayna u kaxeeyeen dhulkii Naarta iyo Birta (Bariga iyo Waqooyiga). ' ”
Biyihiina way kaceen oo dooxooyinkii waxay ku dabooleen dhammaadka dhulka darafkiisan iyo darafkiisa kale. Dhulkii sareeyay ayaa ahaa, dhulka ugu hooseeya ee dhulka (dhulalkii barafka) ayaa wali engegnaa. Oo waxaa halkaas degay kuwo baxsan doona. Ragga Wajiga huruudda ah iyo midka tooska ah (dadka daacad ah oo daacad ah).
Markii Sayidkii Wejiga mugdiga toosay oo ay isku khiyaameen xadgudubyadoodii Viwax si ay uga baxsadaan biyihii kor u kacayay, waxay arkeen in ay baxeen. ”. (ibid. p. 446.)
Miyay shakhsiyaadka isku dayaya inay xalliyaan dhibaatada gawaarida gawaarida, Atlanteans reincarnated?
Awoodda oo dhan, qaar badan oo ka mid ah maskaxdihii ka soo shaqeeyay jirdhisyadii Atlantean ayaa mar kale ka muuqda ilbaxnimada hadda la dhisay, ilbaxnimadan waxay leedahay xarunteeda gudaha Mareykanka iyadoo laamaheeda iyo hirarka ay ku fidsan yihiin dhammaan qaybaha adduunka. Arinta oo dhan waa in soo saareyaasha taariikhdan ay yihiin kuwa maskaxda ka soo shaqeeyey ama lagu baray cilmiga Atlantis oo sababaya inay dib ugu soo baxaan hal abuurnimo la mid ah da'deena oo ay horay uga baran jireen Atlantis. Waxyaabaha cusub waxaa ka mid ah diyaaradda. Suuragalnimada duulimaadka nin, ama duulista hawada, ayaa lagu jees jeesay oo lagu jees jeesay waqtiyadii ugu dambeeyay, iyo xitaa kuwa ugu badan ee “sayniska” ah ayaa hindhisay soo jeedinta ama waxay uga hadlayeen inuu yahay "fatuus fatuus" ama sheeko caruureed. Hal-abuurka diyaaradda iyo buufinnada digniinta ah ee laga digtoonaan karo waxay muujiyeen in duulista hawada ay suurtagal tahay, wixii la qabtayna waxay muujineysaa in nin aan aad uga fogayn awoodi doono inuu jidkiisa ku marsiiyo hawada sida ugu wanaagsan ee uu hadda u maareeyo jidkiisa. biyaha. Maskaxda ninku si dhakhso leh ayay uga adkaaneysaa dhibaatooyinka marin hawada. Laakiin isagu wali ma uusan helin qaabkii uu ku heli lahaa mana awoodo inuu la xiriiro dariiqa loo maro duulista fudud. Dadku si fudud ayey u duulaan karaan sida shimbiraha oo kale hadda u duulaan, laakiin waa markii uu bartay inuu la xiriiro oo isticmaalo xoogga ay shimbirtu u adeegsato duulimaadkooda. Shimbiruhu kuma xirna oo keliya xoog jireed si ay u duulaan. Waxay ku baaqayaan hawl gal aan ahayn wax jireed oo ay la xidhiidhaan jidhkooda oo dhaqaajiya jidhkooda. Shimbiraha kuma xirna baalasheeda xoogga duulimaadka. Waxay u adeegsadaan baalashooda iyo baalashooda sidii dheelitir ama kabaal ay jirku isugu dheelitiro oo loogu hago marinnada hawada. Dadku jidhkiisuu ku samayn karaa waxa ay shimbirtu hadda ku sameeyaan waxa ay samaynayaan, ama, ninku wuxuu dhisi karaa mashiinno ay ku dhex socdaan hawada. Wuxuu u wareegi doonaa hawada, ugu guulaha badan kaliya markii uu bartay inuu la qabsado oo uu la xiriiro xoogga isaga laftiisa mashiinada duulaya ee uu dhisi karo. haddii ninku sidan sameeyo wakhtigan waa wax aad u badan oo macquul ah inuu ninku sidaas oo kale sameeyay isla wakhtiyadii hore. Waxaa macquul ah in Atlanteansku ay aqoon u leeyihiin awooda sababa duulista oo ay awood u lahaayeen inay awooddan u horseedaan jirkooda, taasna ay u saamaxday inay duulaan, isla markaana la qabsashada isla awoodda ay u leeyihiin mashiinnada cirka, iyagoo markaas nidaaminaya duulimaadka. ee mashiinnada noocan oo kale ah sida ay rabaan. Maskaxdu waxay dib ugu soo noqotaa da'da illaa da'da, min hal jireed ilaa mid kale. Maskaxda dadku ma barto oo waxay ku dhan tahay hal jinsi ama ilbaxnimo. Waxay lagama maarmaan u tahay maanka inuu ku dhex maro ama dhammaan jinsi iyo ilbaxnimo horumarkiisa qun-yar. Waa wax macquul ah in la maleeyo in maskaxda ku hawlan su'aasha ama ku celcelinta maraakiibta hawada in ay yihiin isku maskax ay welwel ka qabaan dhibaatada ka jirta Atlantis.
Haddii Atlanta ay xallinayaan dhibaatada hareeraha hawada, iyo haddii kuwa hadda ka walaacsan dhibaatada la mid ah ay ahaayeen Atlanta, ka dibna sababta ay shakhsiyaadkaasi u noqdaan kuwo aan dib loo bilaabin tan iyo markii ay Atlantis ka hor iyo hadda ka hor, iyo haddii ay mar kale horey u soo dhigeen da'dooda hadda jirta, sababta ay u awoodi waayeen inay hawada sare u qaadaan ama u duulaan intaan wakhtiga la joogo?
In Atlanteans-ka xallisay dhibaatada marin-haweedka weli lama caddeynin, lamana caddayn in Atlantis-ka jiray. Ugu yaraan ma cadeynin cadaymahaas oo ay u baahan yihiin sayniska casriga ah. Caddeymo badan ayaa la bixiyay in Atlantis-ka uu jiray, sida kuwa aan soo sheegnay ama kuwa ay siiyeen Badda Sargassa. Laakiin haddii aadanaha hadda joogo uu xallin karo dhibaatada duulista hawada, ma ahan wax aan macquul aheyn in la maleeyo in aadanaha Atlantis ay iyagana xallin karaan. Haddii reincarnation ay dhab tahay, waa wax macquul ah, runtii waa hubaal, in haddii kuwa maanta ku nool oo dhisa mashiinno ay ku dul socdaan ay baranayaan dhibaatada hawada ka jirta Atlantis, iyo in ay dib u soo laabteen marar badan iyo suurtagal dalal badan ilaa laga bilaabo badweynta Atlantis. Si kastaba ha noqotee, waxa suuro gal ku ahayd hal xilli ilbaxnimo weyn laga yaabee suurtogal ma aha wakhti kasta oo ilbaxnimo kale. Maaha arin taasi sababta oo ah qof maskax ahaan xalin kara dhibaatada hawada ka jirta Atlantis waa inuu awood u leeyahay inuu duulo ama ka dhiso mashiino duulaya qeybaha kale ee dhulalka kale iyo waqtiyada aan laga faa'ideysan.
Duulista hawada waa saynis, hase yeeshe, waa mid ka mid ah cilmiga. Waxay kuxirantahay oo ma sameyn karto cilmiga kale. Ilaa qaar ka mid ah cilmiga saynisku ay soo saareen dhinaca muuqaalka jir ahaaneed ee cirku ma guuleysan karo. Aqoonta sayniska sida makaanikada, uumiga, kiimikada, korantada, waxay lagama maarmaan u tahay soosaarka hawada. Wax kasta oo aqoonta aasaasiga ah ee maskaxdu yeelan karto lafteeda aqoonteeda iyo awoodeeda iyo awooda duulista, ilaa iyo inta aaladaha jireed laga gudbayo iyo ilaa maskaxdu ka barato sharciyada xukuma jirka, ma jiraan maraakiibta ama mashiinada hawada. si guul leh loo dhisay ama loo isticmaalay. Kaliya waqtiyada casriga ah ee sayniskaan dib loo cusboonaysiiyay ama dib loo baadhay. Kaliya marka macluumaadka ay bixiyaan ay yihiin ama loogu dabaqay duulista hawada, waa macquul in la maleeyo in marinka hawada sare ay suurogal tahay. Waxay u egtahay in dadkii hore ay aqoon hore u leeyihiin cilmiga, laakiin iyagu ugama aysan hadlin wax diiwaan ah sida loogu baahan yahay cadeyn si loo muujiyo inay aqoon aqoon u leh dhamaan cilmiga wada, sida hada si tartiib tartiib ah loo horumarinayo.
Maskax ahaan shakhsiyan dib ugulaabashada mid ka mid ah wadamada reer Yurub ama Aasiya shantii sano ee la soo dhaafey maheli karin shuruudaha lagama maarmaanka u ah in lagu dhiso hawo iyo duulimaad gudaha ah. Haddii aysan jirin sabab kale, markaa sababta oo ah nacaybka diinta ee dalka ayaa ka horjoogsan lahayd inuu adeegsado aqoonta laga yaabo inuu ka dalbaday Atlantis. Tusaale ahaan: haddii dhammaan buugaagta qoraalka ee sayniska casriga ah laga saaro dunida oo qaar ka mid ah soo-saareyaashayada iyo saynisyahannada qaarkood ay u dhintaan oo ay ku soo noolaan doonaan qayb ka mid ah adduunka aan la xidhiidhin ilbaxnimada casriga ah, tan ugu weyn saynisyahannadan iyo soo-saareyaashaas. awoodi waayey noloshaas in ay bixiyaan shuruudaha ay ilbaxnimadii ay uga tagtay ay awood u yeelatay. Inta ugu badan ee ay sameyn karaan xitaa aqoon ay ku noolaayeen oo ay yaqaaneen oo ay sameeyeen wixii hadda la og yahay in la sameeyo ma u suurtogelin doono inay sameeyaan isla wixii ay ku hoos jiraan xaaladaha la beddelay. Waxyaabaha ugu badan ee ay sameyn karaan waxay noqon karaan inay u noqdaan horyaal. Waxay ku qasban yihiin inay wax baraan dadka ay dib ugula soo noqdeen isla markaana ka mahadceliyaan suurtagalnimada mustaqbalka, inay dadka bartaan xaqiiqooyin gaar ah, oo ay baraan inay fahmaan sida ay u dhaqmayaan cilmiga. Hal nololeed uma oggolaanayo waqtiga loo baahan yahay in lagu dhiso shuruudaha oo lagu baro dadka ilaa ay ka doonayaan damacyada casriga ah. Kaliya sida maskax kale oo horumarsan ay ku dhexjiraan dadka, iyo maskaxda maskaxdoodu sii korodhay ayaa sii jiitamayay oo "ogaanaya" sharciyo gaar ah oo horumarinaya warshadaha iyo caadooyinka dalka, suuragal ma noqon kartaa in la helo aasaas shaqo oo ilbaxnimo. Waxay ku qaadatay da’da in bini’aadamka la baro oo loo horumariyo xaaladdiisa hadda jirta, ka dib markii ay gashay gudcurka mugdi soo foodsaaray ilbaxnimadii hore. Marka aadamigu ka soo baxo mugdiga iyo jahliga iyo nacaybka iyo sida maskaxdu u janjeersato ay u sii furfurnaadaan, markaa wixii ka soo baxay ilbaxnimadii hore ayaa laga yaabaa in mar kale, dib loo soo bandhigo oo la dhammaystiro. Sida muuqata waxaan soo dhowaaneynaa waqtiga dib-u-soo-celinta wixii loo arkaa inay yihiin wax la yaab leh, laakiin kuwaa oo aayar aayar u noqonaya baahiyaha iyo qeybaha nolosheena. In kasta oo shakhsiyaadka ku noolaa Atlantean maydka iyo kuwii halkaas u soo raadshay hawada, hadana waa in marar badan dib loo soo noolaa tan iyo markabkii Atlantis, iyo in kasta oo xilligii iyo wakhtiguba ay ka hortageen adeegsiga aqoonta duulista hawada, hadana waa waqtigii ay shaqsiyaadkaasi dhici karaan u soo xaadiraan imminka aqoontoodii hore, maxaa yeelay shuruudaha waa ay diyaar yihiin oo waxay awoodi doonaan inay maamulaan hawada oo ay u duulaan mustaqbalka madaama ay ahaayeen sayidkii hawada ee Atlantis.